CHIAVARI Apt x4 Isitiya esinembono & neyokupaka!
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguWelcome To Liguria
Ifulethi elipholileyo lihlaziywe ngokupheleleyo, liyakwazi ukuhlalisa ukuya kuthi ga kwi-4 abantu, ebekwe kwi-villa ekwabelwana ngayo kodwa inomnyango ozimeleyo, imizuzu nje emi-5 ngemoto ukusuka elwandle kunye neziko lembali, kunye nemizuzu esi-8 ukusuka kwiPort Tourist. Inazo zonke izinto eziyimfuneko zokuhlala okumnandi, kubandakanya indawo yokupaka enye kunye negadi enkulu enezixhobo ekwabelwana ngazo kunye nezinye iindwendwe ze-villa, apho unokonwabela umbono omnandi wesixeko kwaye, umgama, wolwandle.
Indlu ye-35 sqm ibekwe kumgangatho ophantsi we-villa ekwabelwana ngayo kunye namanye amagumbi, apho yabelana ngegadi enkulu yangaphandle eneetafile kunye nezitulo.
QAPHELA: kwelinye icala lendlu kukho i-scaffolding yokupenda i-facade yangaphandle ye-villa. Nangona kunjalo, imisebenzi imisiwe kwixesha lasehlotyeni, ngoko ukuhlala akuyi kuphazamiseka.
Indawo yangaphakathi ihlelwe ngolu hlobo lulandelayo:
- Ikhitshi lixhotyiswe ngesitovu serhasi, ifriji, isikhenkcisi, imoka, iketile engeyiyo yombane, itoaster, ijuicer yezandla kunye nemicrowave
-Igumbi lokulala elinebhedi enkulu, iibhedi ezimbini ezingatshatanga, idehumidifier kunye newodrophu
-Indlu yangasese enewc, ibhidet kunye neshawari.
Izibonelelo ezongezelelweyo ezifumanekayo kwiindwendwe: indawo yokupaka enye, i-WIFI ENGAPHAMBILI, oomatshini ababini abakhulu bokuhlamba babelana kunye nezinye iindwendwe kwaye bahlala ngaphandle kwe-villa, i-TV, ukufudumeza okuzimeleyo, i-fan, i-drying rack, i-iron kunye ne-ironing board.
Iitawuli kunye nelinen zifakiwe (kunye nelinen eyongezelelweyo yokuzikhethela kwintlawulo).
IPearl yaseTigullio, iChiavari yenye yezona dolophu zibalaseleyo kunye nezona zidumileyo kwimpuma yeGenoese, esembindini wegophe elikhulu elihoywa zizixeko eziqaqambileyo: iPortofino echulumancisayo, iSanta Margherita Ligure edumileyo, iRapallo edumileyo. , phakathi kwabanye. I-Cinque Terre, kunye neelali ezimangalisayo zokuloba ezidumileyo kwihlabathi jikelele kunye nePaki yeSizwe egcwele iindlela zokuhamba kunye nemisebenzi ikude, ifikeleleke ngolwandle okanye ngoololiwe bengingqi obutofotofo.
I-Chiavari sisixeko kwisikali somntu, silungele naluphi na uhlobo lweholide. Unxweme luphawulwa ngolwandle olude lwesanti elungileyo, lufikeleleka ngokulula ukusuka elunxwemeni lolwandle, apho unokuhambahamba phakathi kwemivalo, iipari ze-ayisikrimu kunye neeresityu. Ngokuhamba ngeendlela ezininzi zangaphantsi, unokufikelela ngokulula kwiziko lembali, uphawu kunye neendawo zokuhlala zenkulungwane yeshumi elinesithoba kunye neendlela eziqhelekileyo ezineevenkile, iivenkile zokutyela kunye neetrattorias. Ungaphuthelwa ukutyelela iPalazzo Rocca emangalisayo, igadi yezityalo eluhlaza kunye neSanctuary yeNostra Signora dell'Orto, ephefumlelwe yiPantheon eRoma. Ukutyelela kwi-hinterland yaseLigurian kukwacetyiswa, okuya kukuphumelela kunye needolophana zayo ezincinci ezibuyiselwe, izityalo ezinqabileyo kunye neemveliso zasekhaya ezimnandi.
Umbuki zindwendwe ngu- Welcome To Liguria
Siyafumaneka kwiindwendwe naziphi na izicelo kunye nolwazi, ukwenza ukuhlala kwakho kube nomdla ngakumbi kwaye kucwangciswe. Kuzo naziphi na iziganeko ezingalindelekanga okanye ingcaciso siya kufikeleleka ngefowuni okanye nge-imeyile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chiavari